Wararka - Horudhac Geedi Socodka Wax Soo Saarka Boodhka Sibidhka Fiber
Hordhac Geedi Socodka Wax Soo Saarka Boodhka Sibidhka Fiber
Habka wax-soo-saarka hordhaca ah
1.Haanta Biyaha iyo Habka Haanta Sibidhka
Waxaa jira hal haan oo biyo nadiif ah iyo hal haan biyo ah oo dhoobo ah ;Labada taangiga biyaha waxaa lagu alxamaa birta kaarboon, haanta biyaha dhoobada leh waxaa loo isticmaalaa in lagu soo celiyo biyaha dib loo warshadeeyay ee habka soo saarista xaashida, biyaha dhoobada leh si ay ugu daraan habka qulqulka, si nadiif ah Haanta Biyaha waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado Biyo Nadiif ah si loo Nadiifiyo Dareenka iyo Qafiska Shabakadda Caadi ahaan.
2.Habraaca Saxarka Warqadda
Habka Saxarka Waraaqda waxa ka mid ah Mashiinka Shredder Waraaqaha, Sifeeyaha,iyo Haamaha Kaydka Saxarka Waraaqaha
Shredder Paper waxaa loo isticmaalaa in lagu jeexjeexo waraaqaha Kraft-ga
Sifeeyaha loo isticmaalo in lagu shiiddo saxarka warqadda si uu u dhoco oo loogu soo rido haanta kaydinta saxarka.
Haanta Kaydka Saxarka Waraaqda Waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo saxarka warqadda.
3. Habka Fuuqbaxa Biyaha ee Qul-qulka ah
Waxa aanu dooran karnaa nidaamka samaynta xaashida qulqulka qulqulka leh ama Noocyada Hatschek Samaynta nidaamka xaashida si loo sameeyo xaashida, waxaanu ku habeyn karnaa si waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Dareeraha Walaaqan ee Si Wanaagsan Isku Dhaafay Ayaa Ku Soo Qulqulaya Sanduuqa Biyo-qulqulaya, Ka Dib Ka Soo Qaadista Sanduuqa Slurry Si Aad U Socoto Si Loo Sameeyo Lakab Biyo-Dheer ah, Iyada oo leh Fuuqbaxa Vacuum iyo Roller-ka Laabta si loo Sameeyo Lakabka Sheet, Ka dib Lakabyada Wareega Wareegga Samaynta Wareegga Samaynta Gawaarida Durbaanka, Ka dibna Si Toos ah u Goyso Foomka xaashida qoyan ee fidsan .
Kala-soocida Biyaha-Hawo : Waxa loo istcimaalaa in lagu kala saaro isku dhafka biyaha uumiga ee laga soo saaray sanduuqa faakuumka, loogu shubo ceelka wax lagu ururiyo, hawadana waxaa dib loogu soo rogaa bamka vacuum-ka.
4.Habka samaynta xaashida qulqulaya ee qulqulaya
Kadib Samaynta Goosha Samaynta Rollerka,kadibna Meel Dhigista Laser-ka Toos ah iyo Goynta,Kombuyutarka oo dhan ee xaashida qoyan waxay galiyaan habka gudbinta.
5. Nidaamka Goynta Biyaha Cadaadiska Sare
Nidaamkan Biyaha Cadaadiska Sareeya waa Qalabkayaga Patent-ka, oo leh Bamka Biyaha Cadaadiska Sare ee la soo dejiyey si loo sameeyo Biyaha Cadaadiska Sare si aan nadiif u goyno xaashida qoyan ee wareejinta.
6. Samaynta xaashi qoyan iyo habka gudbinta xaashida qoyan
Habkan waxa loo istcmaalay in lagu soo gudbiyo xaashida qoyan ee si fiican loo jeexay laga bilaabo samaynta rullaluistemadka u gudbi xaashida qoyan si ay u meel dhigto oo si otomaatig ah u goyso cidhifkeeda.
7. Isboortis toos ah
Laba go'yaal ayaa hal mar la is dulsaaran karaa.Koobka Nuugista waxa uu nuugaya xaashida qoyan ee ka soo qaadashada mishiinka wareejinta iyo Template-ka Trolley ee meel kale oo shaqo, oo ka dibna ku dul dulsaaraya Trolley-ka oo ku yaala booska dhexeDhaqdhaqaaqa saxda ah ee koobka nuugista waxa lagu xaqiiqsaday Gear ku yaal gacanta lulaynta oo uu riixayo Usha Haydarooliga ah.
Xakamaynta PLC, Hawlgalka Tooska ah.
Shaqada: Istiirka Tooska ah waxa loo isticmaalaa in lagu kala saaro oo lagu xidho tayada iyo agabka hoose ee looxa sibidhka fiber-ka/Boodhka Silicate Calcium.
Alaabta ayaa si nidaamsan oo heer sare ah loo farsameeyay, taasoo si wax ku ool ah u wanaajin doonta wax soo saarka
8 .Mashiinka Daabacaadda
Waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo cufnaanta iyo xoogga alaabta,
Cadaadiska caadiga ah: 7000ton, Cabirka Miiska: 1350 * 2700/3200mm, Fogaanta: 1200mm, Istaroogga Shaqada: 400mm, Xawaaraha Cadaadiska: 0.05 ~ 0.25mm / s;
Xawaaraha soo celinta: 15 mm / S
Gudaha iyo Dibadda ee Baabuurka Gaadiidka: Hal Cutub.
9.Trolley habka jiidashada
Culayska La Ogolyahay: 20T
Masaafada Gudaha ee Xadiidka Tareenka: 750mm
Qaab-dhiseeyaha: fa67-60-y-1.5, I = 50
Xawaaraha baabuurka: 1380r / daq, Awood: 1.5kw
Xawaaraha Socdaalka ee Trolley: 9m / daq
10. Mashiinka Demoulding vacuum
Dhaqdhaqaaqa Baabuurka iyo Kor u kaca iyo Dhicida Koobka Nuugista waxa gacanta ku haya Servo Motor.
Mashiinka wax duminaya ayaa kala saaraya Template-ka iyo xaashida Trolley-ka, Template-ka waxa lagu dhejiyaa mishiinka burushka saliida si uu saliida u cadaydo, xaashidana waxa ay ku tuulan tahay Trolley dhinaca kale.Ku dar hal badeecooyin Autoclave Interleave ah 150 mm kasta.
Dhaqdhaqaaqa saxda ah ee koobka nuugista waxa lagu xaqiiqsaday Gear ku yaal gacanta lulaynta oo uu riixayo Usha Push Pneumatic.
Sababo la xiriira Astaamaha Guddiga Sibidhka Fiber / Calcium Silicate Board, Lime iyo Quartz Sand Powder ayaa loo Isticmaalaa Sida Walxaha Ceyriinka ugu Weyn ee Geedi Socodka Wax Soo Saarka, Kaas oo u Baahan Si Loo Helo Fal-celinta Kiimikada Hoosta Heerkulka Sare iyo Deegaanka Cadaadiska Sareeya Si Wanaagsan Ugu Filan, Oo Go'yaasha Wanaajiyo Adag iyo Xoog.
Geedi socodka wax soo saarka ee looxa sibidhka Fiber/Calcium silicate Board, Autoclave iyo qalajiyaha ayaa loo isticmaalaa habaynta, iyo
Tamarta kulaylka ee Autoclave iyo qalajiyaha waxaa bixiya kuleyliyaha!
Waxa loo isticmaalaa in lagu qalajiyo guddiga sibidhka fiber-ka/Kaalshiyamka Silicate Board, Ka dib markii Autoclave lagu daweeyo, nuxurka qoyaanka ee looxa sibidhka waa qiyaastii 25%.Kahor inta aan la ciidin, jeexin iyo kicin, qoyaanka
Waxa ku jira waa in lagu dhimo in ka yar 15% Qalajiyaha.Qalajiyaha ayaa leh faa'iidooyinka Wax-soo-saarka Sare ee Wax-soo-saarka, Muuqaalka Quruxda badan, Dayactir ku habboon iyo Hawl-fudud.
14. Nidaamka Goynta Cidhifyada
Waqtiga boostada: Nov-02-2021